Global Voices teny Malagasy » Japan: Eritreritra manodidina ny fahelana velona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Febroary 2010 21:23 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Japana, Fahasalamàna, Hevitra
Amin'ny maha-firenena mora antitra azy indrindra manerana izao tontolo izao ankoatra ny fananany taha-pahavelomana avo indrindra , Mila mieritreritra momba ny hatsaram-piainana sy fiaraha-monina mahatsangy no ary indray i Japan. Na izany dia vitsy ihany no mandinika ny momba io amin'ny tsirairay avy. Ao amin'ny lahatsoratra manao hoe (Mety ho loza) ny fahelana velona  (長生きはリスクである), ny mpamaham-bolongana Satonao no mizara ny fomba fijeriny manokana fa angamba tsy tokony hankalazaina izany fahelana velona izany.
Angamba noho ireo namako akaiky ahy miditra amin'ny fahatelopolo sy fahaefapolo taonany ary reko matetika ny tantara izay mitambesatra ao an-trano : Trotraka ravehivavy noho ny fikarakarany ny ray aman-dreniny, Mitety ny hopitaly isan-karazany noho ny homamiadana ny rainy, na misy voa ny sain'ny reniny ka mila fikarakarana mandritra ny andro manontolo. Ny faratampony amin'izany, tsy nisy fitomboana ny karama ary kely ny vola am-pelatanana. Samy manana ny ahiahiny sy ny olany ny tsirairay. Maro amin'ireo itambesarany no mety hanao fehinteny hoe “tsy midika avy hatrany ho fahasambarana ny fahelana velona”. Efa ela no nanjaka tamin'ny vahoaka japoney izany fomba fiheverana mametraka fa mizotra ho amin'ny fahasambarana izany hoe lava velona izany. Azo heverina fa ilaina ovaina izany fomba fiheverana izay miraikitra ao an-dohantsika hatramin'ny vanim-potoanan'ny Showa  izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/02/22/5094/
 taha-pahavelomana avo indrindra: http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=sp_dyn_le00_in&idim=country:JPN&dl=en&hl=en&q=life+expectancy+japan
 (Mety ho loza) ny fahelana velona: http://www.satonao.com/archives/2010/01/post_2813.html
 tantara izay mitambesatra ao an-trano: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=49501
 vanim-potoanan'ny Showa: http://www.japantoday.com/category/book-reviews/view/showa-japan-the-post-war-golden-age-and-its-troubled-legacy
 Japan: Momus, eto amin'ity firenena miha-antitra ity: https://globalvoicesonline.org/2010/02/12/japan-momus-on-this-ageing-country/